कपाल को लागी कोलेजन - महान लाभ | बेजिया
कपालको लागि कोलाजेनको5फाइदाहरू
सुसाना Godoy | 08/05/2022 18:00 | सुन्दरता
हामीले कोलाजेनको बारेमा सबै सुनेका छौं र यो हाम्रो छालामा थप लोच थप्न, नङ र निस्सन्देह, कपाललाई बलियो बनाउन जिम्मेवार छ। प्राकृतिक प्रोटिन भएकाले यो हाम्रो शरीरका लागि फाइदाजनक छ तर, के तपाईलाई थाहा छ कपालको लागि कोलाजेनका फाइदाहरू?
त्यहाँ धेरै उपायहरू छन् जुन हामीले खोज्छौं ताकि हाम्रो कपाल सधैं राम्रो उपचार होस्। ठिक छ, यस अवस्थामा हामीले थप हेर्नु हुँदैन किनभने कोलाजेनले तपाईलाई चाहिने सबै कुरा दिन्छ। शरीरले प्राकृतिक रूपमा उत्पादन गरे पनि समय बित्दै जाँदा यो घट्नु अपरिहार्य छ। त्यसैले त्यो अतिरिक्त रकम थप्नुहोस् र सबै फाइदाहरूको आनन्द लिनुहोस्।
1 कपालको लागि कोलाजेनको फाइदाहरू: थप चमक थप्छ
2 सुझावहरू पुन: उत्पन्न गर्नुहोस्
3 तपाईंको कपाललाई बाक्लो बनाउँछ र कपाल झर्नबाट रोक्छ
4 निर्जलीकरणलाई अलविदा भन्नुहोस्
5 कपाल छिटो बढ्नेछ
कपालको लागि कोलाजेनको फाइदाहरू: थप चमक थप्छ
तपाईको कपालमा अलिकति चमक हुनु एक साधारण कार्य जस्तो देखिन्छ, तर यो सधैं त्यस्तो हुँदैन। यसलाई हेर्नको लागि, हामीलाई कपालको साँच्चै हेरचाह र स्वस्थ हुन आवश्यक छ। यद्यपि हामी प्रयास गर्छौं, यो जस्तो कार्यको लागि कोलाजेनमा सट्टेबाजी जस्तो केहि छैन। त्यसकारण, हेरचाहको अतिरिक्त, हाम्रो कपाल एक आदर्श चमक पाउनुहुनेछ। हामी भन्छौं, यसलाई हेर्दा मात्र थाहा हुन्छ कि हामी स्वस्थ कपालको सामना गर्दैछौं।
सुझावहरू पुन: उत्पन्न गर्नुहोस्
चमक महत्त्वपूर्ण हुँदा, कपालको छेउ धेरै पछाडि छैन। किनकि हामीलाई थाहा छ, हामी सधैं तिनीहरूको बारेमा सचेत छौं, तिनीहरूलाई काट्न, थप हाइड्रेशन थप्न ताकि तिनीहरू नखोल्नुहोस्। तर कहिलेकाहीं विभाजित अन्त्यहरू अपरिहार्य छन्। निस्सन्देह, तपाइँ तिनीहरूलाई फेरि देख्नुहुन्न भनेर सुनिश्चित गर्न, कोलाजेन जस्तो केहि छैन। हो, यो अर्को ठूलो फाइदाहरू हो जुन आँखा झिम्काउँदा वास्तविकतामा परिणत हुन्छ।
तपाईंको कपाललाई बाक्लो बनाउँछ र कपाल झर्नबाट रोक्छ
यो अर्को फाइदा हो जुन हामी पनि धेरै चासो राख्छौं। किनभने यदि तपाईंले आफ्नो कपाल कमजोर भएको र सजिलै झर्ने देख्नुभयो भने, तपाईंले थाहा पाउनु पर्छ कि यो विभिन्न कारणले हुन सक्छ। तर जब त्यहाँ विशेष गरी एक छैन, सायद यो किनभने कोलाजेन को लागी कमजोरी को अधिक चाँडै उपचार गर्न सकिन्छ। हो, यस अवस्थामा यसले उसलाई आफ्नो पतनबाट जोगिन र एकै समयमा, उसलाई थप बल दिन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पातलो वा कमजोर कपाल शरीरको साथ बलियो र बाक्लो देखिन्छ। त्यसोभए निस्सन्देह, यो केहि चीज हो जुन तपाईले पक्कै खोजिरहनु भएको थियो।
निर्जलीकरणलाई अलविदा भन्नुहोस्
कपाल हेरचाहको बारेमा कुरा गर्दा आधारभूत बिन्दुहरू मध्ये एक यसको हाइड्रेशन हो। किनभने जब हामी कुनै अन्य उपचारको उल्लेख गर्छौं, हामी हामीलाई चाहिन्छ भनेर बिर्सदैनौं सुक्खासँग लड्न। किनकि सबै बिना महत्त्वपूर्ण छन्, यो अझै अलि बढी। तपाईं यस उद्देश्यका लागि खरिद गरिएका र घरेलु दुवै प्रकारका उत्पादनहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर कोलाजेनका फाइदाहरू हेर्दै, हामीसँग यो सबै एकै ठाउँमा हुनेछ। तपाईंले नरम र पूर्ण रूपमा पोषित कपालको आनन्द लिनुहुनेछ।
कपाल छिटो बढ्नेछ
यदि तपाइँ कोलाजेन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने ए टाउकोमा मालिश गर्नुहोस्, त्यसपछि यसले follicles बलियो बनाउँछ। कुन कुराले हामीलाई कसरी झर्ने ढिलो हुन्छ भनेर ध्यान दिनेछ र यसको साथमा, कपालले थप बल लिन्छ र छिटो बढ्छ भनेर हामीले याद गर्नेछौं। पक्कै पनि धेरै पटक तपाईंले छिटो कपालको वृद्धिको लागि समाधानहरू खोज्नुभएको छ, किनकि कोलाजेन जस्ता यो प्रोटीनको कारण तपाईंसँग यो लगभग तपाईंको हातमा थियो।
म कसरी कोलेजन प्रयोग गर्न सक्छु? तपाईंसँग यो विभिन्न ढाँचाहरूमा छ जस्तै ampoules वा ट्याब्लेटहरू, जुन तपाईंको डाक्टरले लेख्न सक्छ। निस्सन्देह त्यहाँ कोलाजेन चिया पनि छ र यसमा भएका सबै सौन्दर्य उत्पादनहरू बिर्सनु हुँदैन। त्यसैले, बाह्य वा आन्तरिक रूपमा, यो सधैं एक महान सहयोगी हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सुन्दरता » कपालको लागि कोलाजेनको5फाइदाहरू
के तपाईंसँग यी जुलाई संगीत उत्सवहरूको लागि टिकटहरू छन्?
खाने विकार भएको किशोरलाई कसरी मद्दत गर्ने